TicWatch E2 sy TicWatch S2: Famaritana, vidiny ary famoahana | Androidsis
CES 2019 dia efa mamela antsika amin'ny vaovao voalohany mifandraika amin'ny Android. Amin'ity tranga ity dia ny Wear OS, ny rafitra fiasan'ny famantaranandro, fantatra amin'ny anarana hoe Android Wear. Satria manana ny smarwatch roa voalohany amin'ity hetsika ity isika. Izy io dia ilay TicWatch E2 sy S2 vaovao. Ny marika dia manolo-tena amin'ny sehatra vaovao, izay misy teboka iraisana amin'ireo maodely natolotr'izy ireo tamin'ny taon-dasa.
TicWatch E2 sy TicWatch S2 no anarana voafidy, raha raisina ny tsipika Express sy Sport an'ny marika aziatika. Ny endrik'ireo modely roa ireo dia navaozina tanteraka. Ankoatr'izay, ny orinasa dia manolo-tena mazava amin'ny fanatanjahantena rano miaraka amin'ireo modely ireo. Zavatra izay hazavain'izy ireo koa ao amin'ny sariny.
Mikasika ny andinindininy, ireo famantaranandro roa dia misy singa vitsivitsy iraisana, araka ny hitantsika tamin'ny famelabelarany. Samy mampiasa processeur iray ihany izy ireo ary manana efijery mitovy habe ary bateria iray ihany. Izy ireo dia aseho ho toy ny famantaranandro roa mety tsara amin'ny fanatanjahan-tena, fa indrindra ny fanatanjahan-tena amin'ny rano, toy ny antsitrika, lomano na surf. Safidy tsara ho an'ireo mpampiasa manao ireo hetsika ireo.
1 TicWatch E2 sy TicWatch S2 famaritana
TicWatch E2 sy TicWatch S2 famaritana
Asehonay anao ny andinindininy momba ireo TicWatch E2 sy TicWatch S2 miaraka amin'ny latabatra, mba ho hitanao mazava tsara ny zavatra atolotry ny tsirairay amin'ireto fiambenana ireto amin'ity sehatra ity. Ireto ambany ireto dia hiresaka lalindalina kokoa momba ny dikan'ireo fika manokana ireo sy ny fampiasana azon'ireto maodelin'ny marika ireto atao.
AMOLED 1,39 santimetatra
Fanapahan-kevitra 400 x 400 teboka AMOLED 1,39 santimetatra
Fanapahan-kevitra 400 x 400 teboka
Satroka Snapdragon 2100 Satroka Snapdragon 2100
DIALY SY TAPATRA
Tady silikôla 22mm azo ovaina Tady silikôla 22mm azo ovaina
415 mAh miaraka amina charger anao manokana 415 mAh miaraka amina charger anao manokana
Mifanaraka amin'ny iOS / Android Mitafy OS
Mifanaraka amin'ny iOS / Android
Fanoherana rano 5 ATM
Senseur tahan'ny fo Fanoherana rano 5 ATM
Ny iray amin'ireo lafiny nanintona ny saina indrindra dia ny safidin'ny mpanodina. Satria nandrasana ny marika dia tokony hitafy Snapdragon Wear 3100, izay misy farany indrindra amin'ny famantaranandro Wear OS. Fa nanapa-kevitra ny hampiasa kinova taloha kokoa izy ireo. Zavatra tsy tokony hisy fiatraikany amin'ny asany, na dia hisy fiatraikany amin'ny fizakantenany aza izany.
TicWatch E2 sy TicWatch S2 dia manolotra eo anelanelan'ny 1 sy 2 andro fizakantena miaraka amin'ny fiampangana feno, hoy ny orinasa. Ity dia fampisehoana mahazatra amin'ity karazana famantaranandro ity, noho izany dia mbola tsy nisy zavatra tsy nampoizina loatra momba an'io marika io. Tonga miaraka amin'ny charger azy ireo izy ireo, izay mahazatra ny marika. Amin'ity tranga ity ihany dia tsy mila manainga ny sfera isika mba hahafahantsika mitondra azy. Io no fiovana lehibe indrindra amin'io lafiny io.
Ireo modely roa ireo dia tonga miaraka amina endrika mitovy, miaraka amina dial AMOLED 1,39-inch. Samy havoaka amin'ny loko mainty izy roa ny TicWatch S2 dia hanana kinova fotsy. Ny takelaka 22-milimetatra amin'ireo famantaranandro roa dia azo ampifamadihina raha naneho hevitra ny orinasa. Mikasika ny rafitra fandidiana dia tonga miaraka amin'ny Wear OS izy ireo ny kinova farany teo.
Ny TicWatch E2 sy TicWatch S2 dia antenaina hiharan'ny magazay amin'ny telovolana voalohany. Raha ny marina dia efa nisy ny fanamarihana fa ny faran'ny volana janoary no hanombohana ny kinova mainty an'ny maodely roa. Ny 22 janoary no daty misy anao, na dia tsy fantatsika aza hoe manerantany na ho an'ny tsena sasany toa an'i Shina fotsiny. Amin'io lafiny io dia mbola tsy nisy fanazavana.
Na dia ho tonga amin'ny volana ho avy aza ny kinova poakatin'ny TicWatch S2, tsy misy daty manokana intsony izao. Ary koa, hatreto tsy nisy na dia iray aza voamarina na voalaza momba ny vidiny amin'ireo famantaranandro vaovao ireo. Manantena izahay fa hanana fampahalalana bebe kokoa tsy ho ela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » TicWatch E2 sy TicWatch S2: Ireo fiambenana vaovao miaraka amin'ny Wear OS
Xiaomi Black Shark Skywalker, antsipiriany voalohany amin'ny telefaona manaraka an'ny mpamokatra